के तपाई कंगाल बन्नुभएको छ ? यी ५ कुराहरू घरमा राख्नुहोस् मालामाल भइन्छ
मे 17, 2019 मे 17, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments कंगाल, घर, दरिद्रता, वास्तुशास्त्र
कतिपय मानिसलाई जीवनमा पैसाको सधै भाव हुने गर्छ । जीवनमा सफल हुनका लागि व्यक्ति दु:ख मेहनत गरेर पैसा कमाउछ, तर कयौं पटक धन सम्बन्धि समस्याहरुको बारेमा चिन्तित रहनछ भने यसको कारण आफ्नो घरमा रहेको वास्तु दोष हुन सक्छ । यस्तो दोषबाट मुक्ति तथा धन र सुखको लागि वास्तुशास्त्रमा यस्ता पाँच चिजका बारेमा बताइएको छ कि जसबाट धन एवं सुखमा बाधक तत्वको प्रभावलाई दुर गर्न सकिन्छ । साथै देवी लक्ष्मीको कृपा बनिरहन्छ । के तपाई कंगाल बन्नुभएको छ ? यी ५ कुराहरू घरमा राख्नुहोस् मालामाल भइन्छ ।
अगस्ट 23, 2018 नोभेम्बर 13, 2018 साइन्स इन्फोटेक 9